Muxuu Cristiano Ronaldo ka yiri goolkii guusha ee uu dhammaadkii ciyaarta ka dhaliyay Villarreal? – Gool FM
Muxuu Cristiano Ronaldo ka yiri goolkii guusha ee uu dhammaadkii ciyaarta ka dhaliyay Villarreal?
Ahmed Nur September 30, 2021
(Manchester) 30 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay guul soo laabasho leh ka gaartay naadiga Villarreal kulan ciyaareed ka tirsan tartanka Champions League.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford isla markaasna ka tirsanaa kulammada labaad ee wareegga guruubyada tartanka horyaallada Yurub ayaa ay Man United ku adkaatay 2-1 iyadoo goolka guusha daqiiqadihii lagu daray ciyaarta uu saxiixay Cristiano Ronaldo.
36-sano jirka lama joojiyaha ah ayaa xusuus kale xalay ku reebay Masraxa Riyada isagoo ciyaarta kaddib saxaafadda la hadlayna waxa uu tilmaamay inuu kooxdan ku leeyahay taariikh wanaagsan sidoo kalena uu doonayo inuu markale taariikh taas la ceyn ah sameeyo.
“Tani waa sababta aan usoo laabtay, Wax badan ayaan u xiisay kooxdan” ayuu Kabtanka Portugal u sheegay BT Sport.
“Taariikh ayaan ku leeyahay kooxdan, waxaana rabaa inaan markale sameeyo” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaa bandhig heer sare ah sameynaya tan iyo kusoo laabashadiisa Ingiriiska isagoo Red Devils u dhaliyay shan gool kaddib shan ciyaarood oo uu u saftay.
Man United, Juventus iyo Bayern oo guulo gaaray, xilli Barcelona la garaacay & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray tartanka UCL… SAWIRRO
Barcelona oo dooneysa inay baddelka Koeman ka dhigto macallin fashil dartiis loo ceyriyay xilli ciyaareedkii hore